Momba anay - Beijing Zohonice Beauty Equipment Co., Ltd.
Hatramin'ny taona 2008, manokana ny teknolojia matihanina sy mandroso izahay ho an'ny salon, spa, klinika ary fanao.
Ny fifantohanay mifantoka amin'ny fanomezana ny mpanjifa miaraka amin'ny fanavaozana fitsaboana mieritreritra mialoha miaraka amina serivisy tsy manam-paharoa amin'ny serivisy sy ny fanohanana ara-barotra mitohy dia nahita ny ekipanay niova haingana ho mpitarika indostrialy - nametraka ny mari-pahaizana momba izay azo atao eo amin'ny sehatry ny estetika. Amin'izao fotoana izao, manome teknolojia fitsaboana maodely sy fanohanana ny fitomboan'ny orinasa amin'ireo stockista mihoatra ny 2000 manerana an'i Shina izahay.
Izahay dia manizingizina ny manomboka amin'ny filan'ny mpanjifa, manohy manome tolotra tolo-kevitra momba ny fisafidianana vokatra tsara, mivarotra ny vokatra avo lenta amin'ny indostria ary mamorona sanda ambony indrindra ho an'ny mpanjifa. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no foto-kevitry ny serivisinay.
Ny ekipanay dia misy manampahaizana manokana momba ny haitao maherin'ny 30 ao anatin'izany ny injeniera mahay, ny mpivarotra, ny mpanolo-tsaina ny teknolojia, ny mpanabe, ny fikarakaran'ny mpanjifa, ny lojika, ny fitantanam-bola, ny mpitantana ary ny mpitantana. Amin'ny alàlan'ity tamba-jotra akaiky ity, dia manome orinasa tsara tarehy amin'ny habe sy ny fahaizana rehetra izahay amin'ny alàlan'ny kalitao avo indrindra sy ny sokajy fitsaboana amin'ny fitaovan'ny kanto rehetra - nohalalinina sy novokarina tamina fanavaozana tsara indrindra an'izao tontolo izao amin'ny teknolojia mandroso ho an'ny salon, spa, tobim-pahasalamana ary fampiharana.
Mazava ho azy, ny ekipa mpivarotra entana avy any ivelany dia misy vondrona tanora mpianatry ny oniversite tia ny indostrian'ny hatsaran-tarehy. Mahay amin'ny anglisy, espaniola, alemanina, frantsay, ary arabo izy ireo ary manome fampahalalana amin'ny indostria ara-potoana sy marina, fampidirana vokatra ary fiasa ho an'ny mpanjifa manerantany. Tari-dàlana, fandikan-teny aorian'ny fivarotana ary asa fanohanana an-tserasera hafa.
Izahay no mpamatsy teknolojia voalohany raha ny amin'ny:
>> Masinina fanesorana volo IPL
>> Masinina fanesorana volo laser 808nm
>> Masinina mampihena ny hatsiaka Cryolipolysis
>> Fitaovana IPL LASER RF Multifunction
>> Fitaovana hatsaran-tarehy laser
>> Fanavaozana ny hoditra PDT LED
>> IPL YAG laser Spare part
>> Nd: Masinina fanesorana tatoazy Laser Yag
>> Mampiasà milina hatsaran-tarehy Mini
>> Masinina manome aina ny hoditra nohavaozina
>> Fotsy fotsy
>> Fiverenan'ny volo laser
ataontsika tsara tarehy ny olona.
"Zohonice Beauty Equipment Co.LTD" dia horaisin'ny salon, spa, toeram-pitsaboana ary tompona Pratics ho mitarika ny lamaody amin'ny fomba tsara tarehy napetraka ary mamorona fomba fiainana an-tany mahafinaritra ..
Tombontsoa azo ianteherana, mahaliana, manavao, manaja, mpanohana ara-barotra, mahafinaritra.